नक्कली प्रहरी बनेर ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ « Loktantrapost
नक्कली प्रहरी बनेर ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ
२८ पुष २०७६, सोमबार १६:४६
भद्रपुर । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाबाट नक्कली प्रहरी बनेर स्थानीय व्यापारीलाई ठगी गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा बाह्रदशी गाउँपालिका–३ स्थित राजगढ बजारमा व्यापार गर्दै आएका वडा नम्बर–४ चकचकी बस्ने व्यापारी अरफाक आलामलाई ठग्ने गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ का २८ बर्षीय पर्शुराम महत्तो र सोही गाउँपालिका वडा नम्बर–३ बस्ने २० बर्षीय जीवन दास रहेका छन् ।
उनीहरुले आलामलाई आफूहरु प्रदेश नम्बर १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका ‘सिआइवी’ प्रहरी भएको भन्दै सोमबार दिउँसो. १२ बजे रु. सात हजार असुलेका थिए । आलामले तत्काल शंका लागि इलका प्रहरी कार्यालय राजगढमा खबर गरेका थिए ।
खबर पाउने वित्तिकै तत्काल खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा ल्याएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रवक्ता महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताए ।